‘कोरोना सर्छ’ भन्दै धुर्मुसलाई घरबेटीले घरबाट निकालेपछि (हेर्नुहोस् अभिनित भिडियो) – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/‘कोरोना सर्छ’ भन्दै धुर्मुसलाई घरबेटीले घरबाट निकालेपछि (हेर्नुहोस् अभिनित भिडियो)
‘कोरोना सर्छ’ भन्दै धुर्मुसलाई घरबेटीले घरबाट निकालेपछि (हेर्नुहोस् अभिनित भिडियो)
कोरोनाको यस्तो महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा उभिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा कर्निलाई समर्पित गर्दै धुर्मुस सुन्तलीले एउटा भिडियो तयार पारेका छन् जुन भिडियो सीताराम कट्टेल धुर्मुसले आफ्नो फेसबुकमा अपलोड गरेका छन् ।
कलाकारितामा रमाउँदै नाम,दाम ख्याति कमाएका धुर्मुस पछिल्ला केही वर्ष भने आफ्नो सम्पूर्ण समय सुन्तलीको साथ समाजसेवामा लगाएका छन् । पछिल्लो समय गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण मा जुटेका धुर्मुस को जिबनी बारे छोटो चर्चा गरौं :
सिताराम कट्टेल नेपालका हाँस्य कलाका’र हुन्। कट्टेल सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचाबे’तघारी गाविसको वडा नं‍. ७ मा जन्मिए’का हुन् । पछि बसाइँ सर्ने क्रममा झापा आई बसोबास गरेका सिताराम कट्टेललाई धुर्मुसको नामले चिनिन्छ। उनी मेरी बास्सै नामक टेलिशृंखला बाट लोक’प्रिय बनेका हुन्।
सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) सगरमा’था अञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा बेतघारी गा.वि.स.मा जन्मिएका हुन्। बुवा बोग’राज कट्टेल र आमा कमला कट्टेलको जेठो छोरोका रुपमा वि. सं. २०४० साल आश्विन ४ गते उनको जन्म भएको हो ।[स्रोत नखुलेको] उनी ८ वर्षको छँदै उनको परिवार झापा झरे’को थियो । माध्य’मिक तहसम्मको अध्ययन सिता’राम कट्टेल’ले झापाको गौरादहमा पुरा गरे ।
निम्न आयस्तर भएको परिवारमा जन्मिए’का उनले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै आर्थिक अभाव भो’गे । कापी कलमको जोहो गर्नका लागि उनी कहिले हलो जोत्थे त कहिले अरुको स्केच चित्र बनाउथे ।
खेतबारीको काम, घाँस दाउरा र घराय’सी काम गर्दै अध्ययनलाई अघि बढाएका उनी विद्यालयमा राम्रो विद्यार्थी’मै गनिन्थे । अत्यन्तै सोझा तर तेजिला सिताराम’ले एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास गरे ।
यस्तै, चलचित्र निर्माण र अभिनय’मा पनि सिताराम कट्टेल सहभागी छन् । छ एकान छ, वडा नम्बर ६ लगायत’मा हिट चलचित्रमा पनि सिताराम कट्टेलले अभिनय गर्नुका साथै लगानी पनि गरेका थिए ।
विक्रम सम्बत् २०७२ वैशाख १२ को गोरखा भूकम्प पश्चात् धुर्मुस सुन्तली’को जोडी सामाजिक काममा पनि सक्रिय छन् । भूकम्प पश्चात् यो जोडीको सक्रियता’मा काभ्रेको डाँडा गाउँमा एकीकृत बस्ती बनाइएको छ ।
धुर्मु सुन्तली एकीकृत नमु’ना बस्ती नाम दिइएको उक्त बस्तीले धेरैबाट प्रशंसा पाएको छ । यस्तै, भूकम्प प्रभावित’लाई न्यानो कपडा बाँड्नुका साथै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित मुसहर बस्तीमा राहत बाँडे ।
यी सामाजिक काम’लाई अझै सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउन उनीहरुले वि.सं. २०७२ सालमा धुर्मु’स सुन्तली फाउण्डेशन स्थापना गरेका हुन् ।
माथि यो अर्तिकलको शीर्षकमा दिईएको सम्बन्धी सामग्री स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी हरुप्रती समर्पित यो भिडियो हेर्नुहोस । यहाँ थिचेर भिडियो हेर्नुहोस।।
बिहानै नाग मणिको दर्शन गरि ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् धन लाभ हुने छ
बुधबार श्रीकृष्णको अवतार विथालदेवको पूजा गर्नुहोस, मिल्छ यस्तो लाभ
मोटरसाइकल दाइजो नपाएर आधा विवाह सकिएपछि मण्डपवाटै वेहुला भागे